Xisbiyada Mucaaradka Somaliland Oo Madaxweynaha Ku Eedeeyey Dib U Dhaca Doorashooyinkii Wakiillada iyo Deegaanka | Himilo Media Group
Xisbiyada Mucaaradka Somaliland Oo Madaxweynaha Ku Eedeeyey Dib U Dhaca Doorashooyinkii Wakiillada iyo Deegaanka
Hargeysa, (Himilo)-Xisbiyada Mucaaradka ah ee WADANI iyo UCID ayaa xukuumadda ku eedeeyey inay sabab u aheyd inay dib u dhacdo doorashadan golleyaasha Wakiillada iyo Deegaanka.
Ugu horreyna, Guddoomiyaha Ku meel gaadhka ah ee Xisbiga Waddani Mudane Cabdiqaadir X Ismaaciil Jirde, ayaa ka hadlay sida uu u arko dib u dhaca ku yimmi doorashooyinkii la filayey inay dalka ka qabsoomaan 29 March 2019, waxaanu yidhi “Qabashada doorashada waxay saaran tahay xukuumadda wayna ka gaabisay, sideed bilood ka hor ayaanu u gudbinay cabashadayada iyo in aanay guddidan doorashooyinku qaban karin doorashada”.
Sidoo kale, waxa uu ku eedeeyey xukuumadda in khilaafka iyo is marin waaga sababay inay doorashaddu qabsoomi weydo uu masuul ka tahay xukuumadda madaxweyne Biixi, isla markaana iska indhotiray xal u helida khilaafkaasi.
“Madaxweynuhu xaq uma laha inuu yidhaahdo komishanka la kala diri maayo, madaxweynuhu wuxuu ku go’aan qaadanayaa sida uu xeerka 20aad farayo guddidaasi uu u saaray ee heer qaran ah waxay soo jeediso ayuu ku go’aan qaadanayaa, guddidan doorashooyinka wakhtigiisii wuu dhammaaday haddii uu joogaana anaga doorasho noo qaban maayo, waana in xeerkii 20aad wax laga beddelo oo guddida doorashooyinka loo sinnaado oo saddexda xisbi min saddex qof soo xushaan”.
Dhinaca kale, xisbiga UCID ayaa sheegay in haddii la sameeyo muddo kordhin aan heshiis lagu ahayn ay ku baaqi doonaan mudaharaadyo aan joogsi lahayn, waxa kale oo uu soo jeediyey in xukuumadda iyo xisbiyadu ba u dhego nuglaadaan saddexdii madaxweyne ku xigeen soo maray oo ku guda jira sidii xal loo heli lahaa khilaafka dib u dhaca doorashaddan ku dhacday oo ay wadaan.
“haddii muddo kordhin aan heshiis lagu ahayn loo sameeyo golleyaasha Wakiillada iyo golaha deegaanka waxaanu abaabuli doonaa mudaharaadyo salmi ah oo joogta ah oo lagu diidan yahay inay sii shaqeeyaan golleyaasha muddo dhaafay, waxaana u dammaanad qaaday dastuurka Somaliland inay muujiyaan awoodoodda”. Ayuu yidhi guddoomiye ku xigeenka xisbiga UCID Cabdinaasir Buuni.
Haddaba, Labada xisbi mucaarad ayaa si weyn uga gows qabsaday dib u dhaca ku yimid doorashadan la filayey inay dhacdo 29-ka bisha saddexaad ee sanadka 2019.